Manohana ireo vondrom-piarahamonina izahay mba hanorina, hitantana ary hiaro ny faritra midadasika amin'ny morontsiraka any amin'ny Faritra an-dranomasina tantanana eo an-toerana, anisan'izany ny faritra lehibe indrindra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Avelantsika ny mpanjono hampitombo ny hazany sy ny fidiram-bolany, hanatsara ny fanjarian-tsakafo ary hamerina ny fiainana an-dranomasina.
Manolotra vahaolana mahomby sy azo ekena ho an'ny fitantanana sy fiarovana ny jono tarihin'ny vondrom-piarahamonina izahay. Mpitarika maneran-tany amin'ny fiarovana ny karbaona manga izahay.
Manangana orinasam-pambolena sy fizahan-tany momba ny zavaboary maharitra izahay. Mamolavola fomba fiasa vaovao amin'ny fampidirana ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny fiaraha-monina amin'ny fiarovana an-dranomasina.
Manamafy ny fitarihana eo an-toerana izahay ary manangana tambajotran'ny fiarahamonim-pirenena, manampy amin'ny famoronana fikambanana mahafaoka izay haharitra ela ny fanohananay.
Mitarika ny politikan'ny jono nasionaly izahay, miantoka amin'izay azo atao fa miaro ny tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana sy mampiroborobo ny zon'olombelona amin'ny fiarovana.
Isan-taona, miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka bebe kokoa izahay, ary mpanjono maro kokoa manerana izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2003, nanomboka tamina vondrom-piarahamonina iray any atsimo andrefan'i Madagasikara. Ankehitriny, miasa manerana ny firenena 14 manerana ny tany mafana izahay, miaro ny 16,080 km2 amin'ny fonenan'ny ranomasina tena ilaina ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona maherin'ny 677,982.
209, 285 olona - mivantana
Ny Blue Ventures dia miara-miasa mivantana amin'ny tanàna eny an-kianja, ny mpiasanay dia manatanteraka ny fanohanana ireo vondrom-piarahamonina ireo.
Olona 139,911 - Voatarika
Nanohana mpiara-miombon'antoka iray ny Blue Ventures teo aloha, ary avy eo dia nanampy tanàna iray hampihatra ny fitantanana an-dranomasina taorian'ny nifaranan'ny fifandraisanay, ary/na nanangana tambajotra iray ahitana fikambanana manohana vondrom-piarahamonina ny Blue Ventures.
265,130 olona - Indirect
Ny Blue Ventures dia manome fanohanana ara-teknika sy/na manome fanampiana ho an'ny fikambanana mpiara-miombon'antoka izay manohana vondrom-piarahamonina avy eo.
63,656 olona - Politika
Ireo vondrom-piarahamonina izay apetraka ny politika vokatry ny fitsabahan'ny Blue Ventures, saingy tsy misy fanohanana hafa avy amintsika.